Kedu ka esi emewanye ahịa Amazon ma ghọọ onye na-ere ahịa kasị mma?
N'ụbọchị anyị, Amazon bụ nnukwu ụlọ ahịa ntanetị kachasị n'ụwa ebe ị nwere ike ịchọta ngwaahịa maka ihe niile masịrị gị. Nzuzo a na-enye ohere magburu onwe ya ma ndị ahịa ma ndị ọzọ na-ere ákwà. Ọ bụrụ na ị nwere smart obibia gị azụmahịa mmepe, Amazon ga-eto gị na elu ego na TOP ọkwa ọnọdụ.
Nlekọta ụlọ ahịa Amazon na-anọgide na-ebili kwa ụbọchị, na-adọta ọtụtụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe - da vincis gold. Dị ka data ndekọ data, ọ dịkarịa ala $ 88,000 na-eji oge ọ bụla zuru ụwa ọnụ n'elu ikpo okwu a. Ndị na-azụ ahịa na-azụ Amazon dịka ikpo okwu ebe ha nwere ike ịhụ ihe niile, ọbụlagodi na Google. Google ka bụ isi ihe bara uru, mana maka ozi, ọ bụghị ndị na-eme nchọpụta.
Na ihe niile a na-ekwu, echere m na ọ ga-abụ ezigbo echiche ịkọrọ gị ụfọdụ ndụmọdụ gbasara esi emewanye ahịa Amazon ma melite ọkwa gị.Yabụ, ka anyị lebakwuo anya na ndụmọdụ ndị a na aghụghọ.
Ụzọ iji mụbaa ahịa Amazon
Mee nyocha dị mma na Amazon
Ike nke ndị nlekọta ndị ahịa na Amazon enweghị ike elelị.Ha nwere mmetụta dị mkpa na ndepụta gị na ntanetị nchọpụta nke Amazon ma nwee ike ịmezi ma ọ bụ mebie mgbalị gị kachasị mma. Dị ka ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya, 88% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na ha na-atụle nyochaa na ntanetị dị ka ndụmọdụ nke onwe ha ma mee mkpebi ha na-azụ na-adabere na ọnụ ọgụgụ na ogo nke nyocha ndị a na-adị na nso nso na ọkwa ndị kpakpando.
Ọ bụ ya mere ị ga-eji mee ihe niile ị nwere ike ime iji mee ka nlele na nlezianya nyocha na ngwaahịa gị. Nyocha na ọdịnaya vidio ma ọ bụ ihe oyiyi nwere ike ịrụ ọrụ ebube. Ya mere, gbaa ndị ahịa gị mgbe niile ume ka ha hapụ nyochaa ogologo na nkọwa iji nyere ndị ahịa ọzọ aka ịme mkpebi ziri ezi. Ọ bụrụ na ị maara ndị mmadụ nọ n'ógbè gị nke nwere mmasị na ngwaahịa gị, gaa na ha ma jụọ maka ịmegharị nyocha.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị mara na Amazon na-agbasi mgba ike megide ndị na-abụghị nke organic ma ọ bụ, na okwu ndị ọzọ, nyocha ndị na-akpali akpali. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jide n'aka na e mepụtara nyocha niile nke ngwaahịa gị ma lee anya.
Iji jikwaa nyocha ọ bụla nke ngwaahịa gị ma na-ama mgbe niile maka mmejọ na-ezighị ezi, ịnwere ike iji nyocha nchọpụta pụrụ iche maka nzube a. Dị ka ọmụmaatụ, Nzaghachi Ngwaọrụ ise ga-enyere aka iwelie olu nzaghachi a ma mee ngwa ngwa na nzaghachi ndị na-adịghị mma.
Na-arụ ọrụ na nhazi njirimara gị na mmelite
usoro nhazi usoro Amazon na-echebara ọ bụghị naanị nyocha ngwaahịa, ọnụahịa, na ọnụahịa, kamakwa ụzọ esi ahazi ndepụta ngwaahịa.Dị ka Google, ịkwesịrị ịkọwapụta nkọwa gị na nchịkọta isiokwu, isi okwu, na nkọwa. Amazon na-enye ndị ahịa ohere ịnweta aha ngwaahịa na okwu ọchụchọ na nkọwa ndị dị mkpa. Akụkụ a nke njirimara nchịkọta nhọrọ Amazon dị iche na Google ebe ịkwesịrị inwe aha dị mkpirikpi na nke kapiri ọnụ na naanị otu ezubere iche maka ọchụchọ ọchụchọ na ya. Otú ọ dị, Amazon chọrọ ka ọ dị mfe ịchọta ma ọ bụrụ na ị chọọ ma ọ bụ bọọlụ ọrụ, na-enye ha nkọwa doro anya nke ngwaahịa n'otu oge. Amazon na-atụ aro ịnye ngwaahịa ndị na-esonụ na aha: ika, nkọwa, akara ngwaahịa, ihe onwunwe, agba, nha, na oke. Otú ọ dị, ọ dịghị mkpa ịgụnye ọnụahịa na ntanetị mgbasa ozi na aha gị iji mee ka ndị ahịa na-etinye uche na isi ihe ọmụma.
Iji chọpụta ihe ọchụchọ kachasị mkpa ma zubere maka ndepụta gị, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị jiri Amazon Keyword tool, bụ nke na-eji ọrụ ntinye aka nke Amazon chọpụta isi okwu ogologo oge. Ọzọkwa, iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịtụle olu ọchụchọ nke okwu ọchụchọ ọ bụla ahọpụtara.
Ụzọ iji merie Buy Buy na Amazon
Amazon bụ asọmpi ịchọta ịsọ asọmpi ebe ị ga - aghọ onye kasị ere ahịa ma ọ bụ merie igbe Buy; ịkwesịrị inwe ezigbo ahịa akụkọ ihe mere eme na iwu ọnụahịa ịsọ mpi. Amazon adịghị enye iwu doro anya banyere otu esi emeri igbe Buy, ma e nwere ọtụtụ ihe ndị a maara na ị ga-emetụta ikike i nwere imeri ya.
Nke mbụ, ị ga-eme bụ ịgbakwunye ọkwa ịzụta zụrụ ihe. Iji mee nke ahụ, ị ​​ga - enwe ihe ndị na - ere ahịa ọkachamara ma bụọ ahia gị ma ọ dịkarịa ala ọnwa atọ. Ụzọ ọzọ otu ị ga esi emeziwanye ya bụ iji ọrụ mmezu Amazon.
Ọzọkwa, iji nweta igbe Amazon Buy, ị ga-enwe ọkwa dị elu. Uzo dị elu nwere ike imetụta ihe ndị dị ka akụkọ ihe mere eme nke ire ere, ọrụ ndị ahịa kachasị mma, ezigbo ndị ahịa ahịa, na ọrụ nnyefe ọrụ.
A ga-akwụnye nlezianya anya maka ụgwọ ala gị (ụgwọ ahịa dị adị na ego ịkwụ ụgwọ). Iji nọgide na-asọmpi na nchịkọta gị, ị ga-eduzi niche niche ahịa ahịa ma ọ bụ jiri ngwá ọrụ iche iche pụrụ iche dị ka FeedVisitor ma ọ bụ Teikametricks. Ngwaọrụ ndị a ga-enyere gị aka nyochaa ọnụahịa nke ngwaahịa ndị dị n'ime ahịa gị. Iji ngwá ọrụ a, ị ga-enwe ike ime ihe niile a chọrọ iji mee ntinye ego gị n'oge ọ bụla ị hụrụ onye na-enye ala dị ntakịrị mgbe ahụ ị nwere.
Gaa na Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi na Amazon
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye uru gị na Amazon, gbalịa ịmepụta usoro ihe omume Microsoft.Ọ ga - enyere gị aka igosipụta ihe gị n'okpuru nsonaazụ ọchụchọ, na aka nri ma ọ bụ na ibe. Amazon PPC bụ ụzọ dị mma maka ndị na-ere ahịa n'Ịntanet iji zụta ọnọdụ na TOP nke Amazon search results. Dị ka usoro a si dị, onye ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ oge ọ bụla onye ahịa jiri pịa ya na mgbasa ozi ya na nsonaazụ ọchụchọ. Ihe nlekota ndi ozo di iche iche gi na ahia gi, ihe di elu nke click igodo gi ga-akwụ.
Ọrụ ntanetị na Amazon
Ụdị nkwurịta okwu ndị a na ndị ahịa dị ka ndị na-akpọ kpọmkwem na ahịa ahia na Amazon. Otú ọ dị, ọ pụtaghị na ịnweghị ike iji usoro nkwalite ọ bụla ọzọ na-adọta ndị na-azụ ahịa n'ụlọ ahịa Amazon gị. Ị nwere ike iji mgbasa ozi blog na mgbasa ozi mgbasa ozi ọha na eze iji nweta nke a. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta blog gị na azụmahịa gị. Ihe ntanetị dị ka Quora, Hubpages, na Go Articles bụ ebe dị mma ịdee ederede gbasara isiokwu gị, ebe ị nwere ike ịhapụ njikọ na ụlọ ahịa Amazon gị.